Autographed Bixinta Buugga! | Martech Zone
Isniin, April 23, 2007 Douglas Karr
Maanta waan helay Buugga Chris Baggott boostada, woohoo!
Marka waa kan heshiiska! Soo iibso nuqul ka mid ah buugga Chris adigoo gujinaya buugga qoraalkan waxaanan ku soo bandhigi doonaa buug kale oo cajiib ah, Aragtida dhunkashada Fiican, 3da qof ee ugu horeeya yaa ii soo dir xiriir xaqiijin ah inay iibsadeen buugga. Buugaagtu waa dib loo saxeexay waxaa qoray Bob Prosen laftiisa!
Waan ku faraxsanahay buugga Chris sababo dhawr ah awgood:
Waxaan isha ku hayaa akhrinta buugga. Chris wadada ayuu ku jiray tan iyo markaas shirkadiisa bilowga hadalka iyo barashada Suuqgeeyayaasha Emailka ee meeraha oo dhan. Shaki kuma jiro buuggu inuu noqon doono oo keliya buug mudan in laga akhriyo Suuqgeynta Emailka!
Chris waa saaxiib iyo lataliye. Waa qof furan, daacad ah, oo si fudud nin walba u fiican. Chris iyo anigu waxaan si dhakhso leh u noqonay saaxiibo markii aan ku biiray shirkadiisa waana i jeexjeexay markii uu u ambabaxay bilowgiisa cusub (laakiin wuu ogyahay inaan ku faraxsanahay isaga!).
Waxaan ku jiraa buugga! Waxaa jira qayb weyn oo ka mid ah buugga ku saabsan otomaatiga iyo is-dhexgalka ee uu Chris weydiiyay Amol Dalvi iyo aniga inaan ka bixiyo jawaab celin. Iska hubi… Waxaan u maleynayaa inaan talo xoog leh ka soo saarnay oo isdiyaari,… Leh ama aan lahayn Suuqgeynta Emailka.
Sidoo kale waxaan haystaa nuqul 4aad oo la duubay oo la yiraahdo Kiss Theory Good Bye for Engtech, Muddo dheer aqriste balooggan oo ka heli waayey nuqul ka mid ah buuggii uu ku noolaa (waxay ku jiri doontaa boostada usbuuca soo socda, Eng!).
Waxaan mahad gaar ah u celinayaa Bob Prosen oo si naxariis leh u soo diray nuqulo ka mid ah buugiisa oo la duubay ka dib akhrinta dib u eegistayda. Waxaan ku dhex wareegaayey buugiisa shaqada iyo asxaabta! Waa buug fantastik ah oo ku saabsan hoggaaminta iyo istiraatiijiyadaha maareynta ee ku habboon urur kasta.
Mahadsanid Doug, oo rajeynaya akhrintiisa.
Waan soo galay. Waxaan kuu soo diray xogtayda waxaanan rajaynayaa inaan qodo buugga cusub ee Chris, gaar ahaan sheegashadaada cusub ee qaybta caanka ah.
Intii aan ka maqnaa Xuduudaha maalin dhaweyd waxaan fursad u helay inaan aqriyo dhowr cutub oo ka mid ah Aragtida Dhunkashada Dhunkashada, taasi sidoo kale waa buug kale oo aad u fiican.